Taageerihii Muraal jabay ee Man Utd, 3,170 oo Mile ayuu u socday Old Trafford Ilaa Sierra Leon kulankii ayaase Baaqday "Sawirro"
Thursday, September 20th, 2018 - 15:39:16
Monday May 16, 2016 - 09:12:54 in Wararka by
Taageeri ka mid ah kuwa Kooxda Man Utd ayaa u socday 3,170 Mile si uu u gaaro Masraxa Riyada Old Trafford si uu usoo daawado Manchester Kulankii xalay ka baaqday.
Mid ka mid ah Taageerayaasha ugu Mayalka adag ee Manchester United ayaa qalbi jab kala laabtay xalay Old Trafford isagoo ka yimid Sierra Leone si uu kulankaas usoo daawado.
Taageeraha Laab jabay oo lagu magacaabo Moses ayaa heli doona Duullimaad cusub oo laga bixinayo, kaasoo uu ku tegi doono Wembley si uu uga daawado Red Devils oo la kulmeysa Crystal Palace ciyaarta FA Cup final ee dhici doonta May 21-keeda.
Ian Stirling, Guddoomiye ku xigeenka Manchester United Supporters Trust, ayaa soo dhigay bartiisa Twitter: "Kani waa Moses. Waxaa uu nooga yimid Sierra Leon si uu u daawado kulankii Old Trafford. Waa uu muraal jabay.”
Ha yeeshee 6-daqiiqo keddib uun wuxuu soo dhigay haddana: "War cusub Moses oo ay u ahaan laheyd kulankiisii u horreeyay ee uu ka daawado OT Maanta. Waxaan u oggolnahay in uu daawado kulanka Wembley kaasoo duullimaadkiisa uu si bilaash ah ku tegi doono Tikit-kana aan laga iibin doonin!”
Man United kulankeedii xiritaanka ee Premier League oo ay ka hortegeysay Bournemouth ayaa Axaddii loo joojiyay walax yar oo laga cabsaday in ay yihiin wax qarxa.
Moses ayaa Muraal dillaaca kula biiray Taageere kale oo soo socday 4,724-mile isagoo ka yimid dalka India si uu u daawado kulankiisii u horreeyay ee toos ah oo ka socda Theatre of Dreams.
Jaydeep oo ka yimid India ayaana ah mid kale oo ka mid ah dadka ugu Nasiibka darraa Kulankaas, wuxuuna Twitter-kiisa kusoo qoray waan ka xumahay wixii igu dhacay.
In ka badan 9,000 oo qof ayaa retweet ku sameysay qoraalkiisa, Wuxuu sidoo kale ku helay 3,000 like.
Rikooradii Laga Diiwaan Galiyay Kulankii Barceloona Goolasha ay Kala Daashay Kooxda Huesca..
Monday September 03, 2018 - 02:34:18